Aubameyang Ayaa La Yimid Bandhig Wanaagsan Iyadoo Arsenal Ay Guul Raaxo Leh Ka Gaartay Newcastle – Garsoore Sports
Aubameyang Ayaa La…
90kii daqiiqo ee qariibka kulankii ka dhacay Tyneside Galabta ayaa ahaa lagu arkayay waxyaabo layaab leh, waxaana macquul aheyd in la aamino in kooxda Mikel Arteta ee Arsenal ay runtii “The Invincibles” kaddib markii ay guul raaxo leh ka gaareen kooxda Newcastle United.
Macno malahan in kooxda martida ah ay cayaarta billowdy iyadoo ku jirta booska 11-aad, balse Newcastle liidata ayaa u sahashay inay kusoo bandhigaan inay u qalmaan in ugu yaraan la dhaho way soo noqotay Gunnerstii tababare Arsene Wenger lagu yaqaanay.
Kooxda Arsenal ayaa ku soo laabatay wadadii guusha iyadoo goolal ay kala dhaliyeen Mohamed Elneny iyo Pierre-Emerick Aubameyang ay siisay guul 2-0 oo ay axaddii ka gaareen kooxda Newcastle United.
Gunners ayaa hoggaanka ciyaarta qabatay lix daqiiqo markii ay cayaarta socotay, kaddib markii laad uu waayay Pierre-Emerick Aubameyang uu u baxay dhinaca cayaaryahan Mohamed Elneny, ciyaaryahanka reer Masar ayaa darbo xoogan ka tuuray meel ka baxsan goosha Magpies iyadoo goolhaye Martin Dubravka ay ka gashay geeska shabaqa.
Arsenal ayaa ciyaarta maamulaysay wixii intaa ka dambeeyay, waxayna sii laba jibaartay faa’iidadooda daqiiqadii 66aad, kaddib markii Gabriel Martinelli uu karoos quruxbadan usoo koroorsay kabtan Aubameyang oo ku jira xerada ganaaxa, kaasoo wixii markaasi ka dambeeyay lugta u dhigay kubbad sarreeysay si uu u dilo rajada Newcastle.
Wiilasha Mikel Arteta ayaana isku diyaarinaya kulanka lugta labaad ee semi-finalka Europa League-ga oo ay la leeyihiin kooxda Villarreal khamiista soo aadan.